Icebo lokucoca ulwelo olunesiqholo
Le mveliso sisixhobo sokuthambisa esisandula ukuveliswa, isiqholo, njl. Yinkampani yethu ukucacisa nokucoca ulwelo emva kokukhenkcisa; sisixhobo esifanelekileyo kumzi-mveliso wokuthambisa ukucoca i-lotion kunye nesiqholo. Isixhobo sale mveliso senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engama-304 okanye nge-316L intsimbi engenasici, kwaye impompo yedaphragm yomoya engeniswe e-United States isetyenziswa njengomthombo woxinzelelo wokucoca uxinzelelo. Umbhobho wokudibanisa wamkela izixhobo ezicocekileyo zombhobho, kwaye zonke zamkela ifom yoqhagamshelo lofakelo olukhawulezayo, olulungele ukuhlahlela nokucoca. Kuxhotyiswe nge-polypropylene microporous filter membrane, esetyenziswa kakhulu kumzi-mveliso wezimonyo, amasebe ophando lwezenzululwazi, izibhedlele, iilebhu kunye nezinye iiyunithi ukucacisa kunye nokubulala iintsholongwane inani elincinci lolwelo, okanye uhlalutyo oluncinci lwekhemikhali, oluluncedo noluthembekileyo.
Le setethi yezixhobo inezibonelelo zomsebenzi ofanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ulwakhiwo olumbeneyo kunye nonyawo oluncinci.
Lo matshini wenzelwe ukuxuba, i-alcolization, ukuzinzisa, ukucacisa kunye nokucoca ulwelo phantsi koxinzelelo oluqhelekileyo kunye nobushushu obuphantsi. Sisisixhobo esifanelekileyo se-astringent, i-perfume, amanzi e-folral kunye ne-mouthninse, njl. Okwangoku inokusetyenziswa kumasebe ophando, izibhedlele kunye neelebhu zokucacisa ukususwa kwebacteria kunye nokucoca izixa ezincinci zolwelo. Imibhobho iqhagamshelwe ngohlobo lonxibelelwano olukhawulezayo, oluhlangabezana neemfuno zemigangatho ye-GMP.
Umzi mveliso wezithambiso: amanzi okuthambisa, isiqholo, ubume
Icandelo lezamayeza: i-mouthwash, ulwelo lomlomo, ulwelo lwamayeza kunye ne-infusions ezahlukeneyo
Icandelo lokutya: utywala, iziselo, njl.
1. Itanki elibandayo lokugcina ubushushu ngentsimbi kunye nombhobho wekhoyili;
2. Iyunithi yokuqandisa;
3. Inkqubo yokuxubusha ubungqina bokuqhuma
4. Impompo yediyaphragm yomoya yokuthintela ukosuleleka;
5. Inkqubo yokuhluza;
6. Inqanaba lococeko lokulinganisa imibhobho yesanti;
7. Uhlobo lokutywina inkqubo yolawulo lombane;
8. Umxhasi wentsimbi engenasici.
Inkqubo yetekhnoloji kunye neempawu
1. Ubushushu obuncinci benkqubo yokuqandisa bunokufikelela -15 ℃
2.Isicelo sokucacisa ukuhluza kunye nokucoca inzala kwizisombululo ezahlukeneyo zolwelo
3. Ukucoca izisombululo zaselebhu kunye nenkcubeko kumajelo eendaba
4. Olunye ucoco olufana netoni, iziqholo, iso, iivithamini, ifotoresist, njl.
Egqithileyo Tube yangaphakathi Ukufudumeza Ukuzalisa kunye noMatshini wokuTywina
Okulandelayo: Umshini wokuLungisa uMatshini ongafakwanga